आफ्नै श्रीमानले सन्तान नभएपछि पत्नीलाई ससुरासँग सहवास गर्न लगाएपछि…! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
यो संसार पनि विचित्रको रहेको छ । मानिसको स्वभाव पनि फरक फरक रहेको हुन्छ । त्यसकारण उसले गर्ने व्यवहार पनि फरक फरक रहेको हुन्छ ।
हाम्रो समाजमा विवाह गरिसकेपछि बच्चालाई ठूलोरुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । कति जनाको बच्चा नभएको कारण घरबार टुटेको देखिन्छ ।
कति महिलाले बच्चा जन्मनदिदा आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनु परेको घटना बाहीर आउने गरेको छ ।एक महिलाको जब विवाह हुन्छ त्यसको सपना हुने गर्छ आफ्नो सन्तान जन्माउने जब सन्तान जन्माउन सक्दिनन् त्यसको पिडा एउटी महिलाले कति सम्म भोग्नुु पर्छ भन्ने उदाहरण एक महिलाले भोगेको पिडाबाट थाहा हुन्छ ।
यो संसारमा पुरुषको तुलनामा महिलाका लाखौँ गुणा बढी पिडा छन् ।आज हामी तपाइलाई यस्तो घटना सुनाउन गइरहेका छौ जुन सन्तान जन्माउनको लागि आफ्नै श्रीमानले ससुरासँग सहवास गर्र्न बाध्य बनाएका छन् । यो घटना भारतको हो ।
भारतको उत्तर प्रदेशमा एक जोडीको विवाह भएको २ वर्षसम्म पनि बच्चा भएको थिएन । बच्चा जन्माउन नसकेपछि पत्नीलाई पतिले तीन पटक सम्बन्ध बिच्छेद गरेका थिए ।
पत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नी पत्नीले पितालाई सुम्पिदिए । महिलालाई एक रातको लागि बुहारीलाई बुवालाई विवाह गराइदिए ।
तर ससुरासँग यौन सम्बन्ध राख्दा पनि नतिजा आएन अर्थात त्यो पटक पनि महिला गर्भवती हुन सकिनन् । एक पटक फेरी निराशा भएर पुरुषले दोस्रो पटक सम्बन्ध विच्छेद गरे ।
र फेरी अन्य पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न लगाउने सोचे । दोस्रो पटक आफ्नोे भाईको कोठामा सुत्न पठाउने निणर्य गरे । यसरी पटक पटक चौथो पटक देवरसँग सुत्न पठाउन खोज्दा महिलाले अस्विकार गरिन् र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन् ।
पहिलो पटक रातमा ससुरासँग सुम्पिदा एक रातको लागि आफ्नै पतिको आमा बन्न पुगिन् । अब देवरसँग रात बिताउन गएमा पतिको भाउनु बन्नेछिन् ।
महिला पतिको यस्तो व्यवहार देखेर प्रहरीको मा पतिको यस्तो व्यवहार रोक्न माग गरेकी छिन् ।उनले पर पुरुषसँग रात बिताउने जस्तो गलत अन्य काम नभएको बताएकी छिन् ।
तीन पटक तलाक दिनमा रोक लागे जस्तै अरुलाई रातमा सुम्पिदिने जस्तो गलत काम रोक्नु पर्ने बताएकी छिन् । एजेन्सी
बोल्दा कसले कति झुठ बोल्छ भन्ने अन्दाजै हुदैन । जीवनमाझुठकुराले धरै अप्ठेरो पार्र्ने गर्छ किनभने
तपाई सफल हुनको लागि आफ्नो जिबनभर यी ७ गोप्य कुरा भुलेर पनि अरुलाई नबताउनुहोस् !
हामो कतिको बानी हुन्छ सानो कुरा पनि अरुलाई भनिहाल्ने बताइहाल्ने र मनमा एक कुरा पनि